कठै ! १६ वर्षीय छोराले पब्जी खेल्न नपाएपछि गरे आमाको ह”त्या.१० वर्षे बहिनीलाई २ दिनसम्म कोठामा थुनिरहे. (भिडियो सहितको रिपोर्ट) – Ap Nepal
कठै ! १६ वर्षीय छोराले पब्जी खेल्न नपाएपछि गरे आमाको ह”त्या.१० वर्षे बहिनीलाई २ दिनसम्म कोठामा थुनिरहे. (भिडियो सहितको रिपोर्ट)
पब्जी खेल्न नपाएपछि आक्रोशित १६ वर्षीय छोराले आफ्नै आमाको गो”ली हानी ह”त्या गरेका छन् । त्यसपछि आमाको श”वसँगै तीन दिनसम्म घरमै बसे । उनले १० वर्षीया बहिनीलाई पनि धम्की दिए र घरबाट बाहिर निस्कन दिएनन् । शव कुहिएपछि दुर्गन्ध फैलिन थालेपछि सेनामा अधिकारी पितालाई आफैंले फोन गरेर आमाको ह”त्या गरेको जानकारी दिए । पिताको जानकारीपछि मंगलबार राती प्र”हरीले श”वलाई घर बाहिर निकाले ।
नवीन कुमार सिंह, मूल रूपमा वाराणसीका, सेनामा एक जुनियर कमिसन्ड अफिसर हुन् । उनको पोस्टिङ पश्चिम बंगालमा छ । लखनउको पीजीआई क्षेत्रको यमुनापुरम कोलोनीमा उनको घर छ । यहाँ उनकी श्रीमती साधना (४० वर्ष) आफ्ना १६ वर्षीय छोरा र १० वर्षीया छोरीसँग बस्दै आएकी थिइन् । छोराले मंगलबार राती बुबा नवीनलाई भिडियो कल गरेर आमाको हत्या गरेको बताए । उनले बुवालाई शव पनि देखाए । नवीनले एकजना आफन्तलाई तत्कालै फोन गरेर घर घर पठाए ।
मंगलबार राति प्र”हरीले बाहिरी गेट खोल्दा घर भित्रबाट असह्य गन्ध आइरहेको थियो । नाकमा रुमाल बाँधेर प्र”हरी भित्र पसेपछि साधनाको कु”हिएको शव ओछ्यानमा प”ल्टिएको थियो । शव यति कुहिएको थियो कि अनुहार चिन्न गाह्रो भएको थियो । साधनाकी १० वर्षीया छोरी पनि त्यही कोठामा रुँदै थिइन् । प्रहरीले छोराले बहिनीकै अगाडि आमाको गोली हानी ह”त्या गरेको बताएको छ । जसका कारण उनी यति त्रसित भइन् कि दाइको आदेशमा आमाको श”वसँगै सुतिरहिन् ।
यस्तै,दार्चुलामा एक महिलाको ह”’त्या भयको छ । शैल्यशिखर नगरपालिका–१ बारिलकी ४० वर्षीया अनिभा खडायतको ह”त्या गरिएको हो । घर नजिकैको खरको लुटोमा आगो लगाएर ती महिलाको ह;;त्या गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्र”हरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले जानकारी दिए । घट”नाको कारण भने खुल्न नसकेको उनले बताइन् । खडायतको शव गए राति फेला परेको वडा नं १ का वडाध्यक्ष भरत खडायतले जानकारी दिए । उनका श्रीमानको सात वर्षअघि मृ”त्यु भइसकेको छ ।
खडायतका दुई छोरी र एक छोरा छन् । घ”टनामा संग्लन रहेको आशङ्कामा प्रह”रीले स्थानीय वीरेन्द्र खडायत र तुला खडायतलाई प”क्राउ गरेको छ । श”ङ्कास्पद एकजना फरार रहेको बताइएको छ । घ”टनाको अनुसन्धान गर्न डिएसपी विष्ट घ”टनास्थलमा जानुभएको छ । प्रहरी चौकी बलाँच र इलाका प्रह”री कार्यालय गोकुलेश्वरको टोली पनि घ”टनास्थलमा गएको छ ।
Prevफैलँदै मनसुनी वायु, आज यी क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना
Nextचर्चित संचारकर्मी रवि लामिछाने संसदीय निर्वाचन लड्ने …
आज बढ्यो सुनको मुल्य, तोलाको कति पुग्यो त ?